ATR 42 / 72 nke nke Lekwasịrị Anya
ATR 42 / 72 nke nke Lekwasịrị Anya 11 ọnwa 2 izu gara aga #1447
Ejiri m ngwungwu ngwongwo ATR gị, mana achọpụtara na ha bụ nrụnye ụgbọ elu. Agbanyeghị na mgbe m họrọ ụgbọelu, ogwe ndị a na-elekwasị anya nke ukwuu. Enwere usọbọ ọ bụla maka nke a. Thedị ahụ nwere ụfọdụ njirimara dị mma mana abaghị uru ọ bụla site na nsogbu mgbado anya.
Oge ike page: 0.153 sekọnd